Kedu ihe bụ akwụ?
New & Ọzọ Smarthome
Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ niche a na-emepụta aha na-eme aha maka onwe ya
Ọ bụrụ na ị nụbeghị banyere Nest ma, ị nwere ike n'oge na-adịghị anya. Nest bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-ewu ewu na ụlọ ahịa kachasị ama, ọ na-enwetakwu ndị na-eso ụzọ ya na ngwaọrụ ndị e mere iji mee ka ụlọ nwekwuo ọnụ. Na mgbakwunye na Nest Learning Thermostat, ụlọ ọrụ ahụ na-amịpụtakwara onye na-achọpụta anwụrụ ọkụ (nke bụkwa ọkachamara carbon monoxide) na usoro nke igwefoto igwefoto ma n'ime ụlọ ma n'èzí.
Ònye nwere Nest?
N'okwu a na-ekwu banyere inweta n'afọ 2014, Google zụtara Nest maka ijeri $ 3.2. Ihe nnweta ahụ na-enyere Google aka Ịntanetị nke Pọtụfoliyo Ihe , na-enye ha isi ịmalite Microsoft na Apple na ahịa ahịa a na-agbasawanye. Otú ọ dị, enwere nchegbu banyere nsogbu nzuzo, na ngwaọrụ ndị aha na aha Google, ya mere, uto maka ngwaahịa Nest eji nwayọọ nwayọọ karịa atụ anya na mbụ. N'agbanyeghị ntakịrị ihe a na-aga n'okporo ụzọ, Nest na-eto ngwa ngwa ma ghọọ aha ụlọ, n'ihi na ọ bụ n'ụzọ dị ukwuu iji dị mfe iji ejiji ngwaọrụ .
01 nke 03
Nest Learning Thermostat, nke na-abịa dị iche iche na agba yiri mgbaaka iji dabara na ụlọ gị decor, na-egosipụta ihe dị mfe na-agụ ngosi na ike ịchịkwa gị kpo oku na mmiri ọkụ na-akpaghị aka. Naanị izu ole na ole, thermostat ga-amụta mgbe na otú ị na-achọ okpomọkụ nke ụlọ gị. Mgbe ị nọ n'ụlọ, ọ ga-ebuli okpomọkụ na mgbe ị na-apụ, ọ ga-agbanye ya, n'ikpeazụ ịzọpụta ike gị.
Ngwaọrụ ahụ na-ekpochapụ ọrụ gị ma na-ewu usoro nke dabeere na data a. Ọ ga-eme ka kpoo ọkụ gị n'abalị ma bulie ya n'ụtụtụ ka ị kulie n'ụlọ ọkụ mara mma. Ka ị na-apụ maka ọrụ, Nest thermostat ga-achọpụta na ị hapụrụ iji ụda sensọ na ọnọdụ ekwentị gị, ma tinye onwe ya na Eco Temperatures iji chebe ike.
Ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ ma ụmụ gị na-ala n'ụlọ, bulie ama gị ma gbanwee ọnọdụ okpomọkụ ahụ site na ngwa Nest.
Karịa Ọchịchị Gburugburu Ebe Obibi
Ụdị Nest Learning Thermostat kachasị ọhụrụ na-enye gị ohere ịchịkwa mmiri tankị dị ọkụ na oge mmiri ọkụ ya, ihe niile a ga-agbanwe site na ngwa ahụ. Chefuru iji gbanyụọ mmiri ọkụ mgbe ị na-apụ? Nsogbu adịghị. Ndị ọbịa na-anọ ma chọọ mmiri ọkụ ọzọ? Nsogbu adịghị. Nest thermostat na-eji nke a maka gị.
Akụkọ thermostat's Energy and History Months na- egosi gị oke ike ị na-eji kwa ụbọchị. Ị nwere ike ịhụ mgbe na ebe a na-eji ike eme ihe n'ụlọ, akụkọ ahụ na-atụ aro otu ị ga - esi jiri obere ike. Oge ọ bụla ị gbanwere okpomọkụ na ụlọ iji chekwaa ike, Nest ga-akwụ gị ụgwọ maka akwụkwọ. N'ịga n'ihu iji mee ihe, Nest Leaf mụtara otú Niz nwere ike isi nyere gị aka ịchekwa ike, itinye okpomọkụ dị iche iche maka ezinụlọ dị iche iche.
Ihe ọzọ gbakwunyere na Nest Learning Thermostat bụ Night Learning Thermostat. The thermostat ga-enwu ma gosi gị okpomọkụ, oge ma ọ bụ ihu igwe. Ịnwere ike ịhọrọ ihu igwe ma ọ bụ elekere anya.
Na - arụ ọrụ na Njikọ Ọkụ Ndị Na - ahụ Maka Ọkụ, ebe ọ na - arụ ọrụ na mmiri ọkụ gị iji kpoo ọkụ na mmiri ọkụ. Njikọ Heat nwere ike ijikọta ma ọ bụ ikuku igwe ikuku gị ma ọ bụ jiri ụrọ thermostat gị dị ugbu a, mgbe ahụ, 'okwu' na thermostat iji dozie okpomọkụ.
Nest ngwa ejikọta site na WiFi, na-enye gị ohere ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ nke ụlọ gị.
02 nke 03
Nest Ezigbo Anwụrụ ọkụ & Carbon Monoxide Detection
Nest Protect bụ ụlọ anwụrụ ọkụ na ebe nchekwa carbon monoxide nke na-agwa gị okwu site na smartphone gị ka ị mara ozugbo ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu.
Akwu Na-egbochi atụmatụ a Sensor Spectrum sensor, nke bụ teknụzụ nke Nest ji achọpụta ihe dị iche iche nke anwụrụ ọkụ, gụnyere ọkụ ọkụ na ọkụ na-ere ọkụ. Ngwaọrụ na-anwale onwe ya na-akpaghị aka iji hụ na ị ziri ezi, ọ na-adịgide ruo afọ iri. Ọ na-agụnye mkpuchi ị nwere ike ịgbachi nkịtị na ekwentị gị. Otu olu mmadụ na-enye ịdọ aka ná ntị n'oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-ese anwụrụ ọkụ na-agwa gị ebe ihe ize ndụ dị ka i nwere ike ime ihe kwekọrọ na ya.
Akwu Chebekwa atụmatụ nke ihe nchọpụta carbon monoxide iji hụ na e chebere ezinụlọ gị site na gas a na-enweghị ntụpọ.
03 nke 03
Nest Ime ụlọ na n'èzí ese foto
Nest Cam ezinụlọ nke ese foto ndị nwere ike iji n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí pụtara na ị gaghị echefu nke abụọ nke ihe na-eme na na n'èzí ụlọ gị. Ngwunye Nest Cams jikọtara ya na nnukwu ike ọkọnọ na-abịa na anya ntụtụ niile maka nlekọta nlele dị nso.
Igwe ese foto nwere ụfọdụ atụmatụ bara uru, gụnyere:
Ikike ịmata ọdịiche dị n'etiti ndị mmadụ.
Usoro a nwere ike iziga gị ihe ngosi ma ọ bụrụ na mmadụ na-eme ka igwefoto rụọ ọrụ.
O nwere ike imenye ndị omempụ ụjọ ma ọ bụ kwe ka gị na ndị enyi gị na ndị òtù gị nwee mkparịta ụka.
Iche ihu na-eme ka ị mara ihu na ndị bịara abịa.
24/7 igwe ojii na-enye gị ụbọchị iri atọ nke akụkọ vidio nke ederede, na ike ịmepụta na ịkekọrịta vidiyo.
Nest Ngwaọrụ jikọtara
Nest nwekwara ike ịgụta ọnụ na ọtụtụ ụlọ ahịa ndị ọzọ dị mma. Ọrụ na Ụlọ Ahịa Nest na-edepụta ụdị ngwaahịa ọ bụla na-arụ ọrụ n'ụlọ. Dịka ọmụmaatụ, ọkụ ọkụ Philips na Wemo gbanwere na-akpaghị aka na-arụ ọrụ na Nest na-enweghị ihe ọ bụla dị mkpa maka usoro nhazi siri ike.
Maka ulo oru akụrụngwa sara mbara karị, ụlọ obibi nwere ike imebi ọnụ na Nest nwere ike inyere gị aka jikọọ akwu na ngwaahịa ndị ọzọ na-abụghị Nest iji mepụta usoro ihe omume zuru oke.
Kedu ihe bụ Smart Plug?
Esi ehichapụ Amazon Alexa ndekọ
Ụlọ ebe a na-akpọ Wiring Fan na Light maka Home Automation
Samsung na-eme ka Smart TVs Smarter na Atụmatụ Home Control
Okwu Mmalite na Ikuku Home Automation
Otu esi eji IFTTT na Alexa
Otu esi jikọọ Echo na Alexa na Wi-Fi
Kedu ebe a na-edebe ọnyà dị ọkụ?
Otu esi ele Instagram na Web
Esi Nwelite Push Gmail na iPhone
Gbanwee ICloud Keychain Code Nchekwa na nọmba ekwentị nyocha
Ego ole ka ọ dị n'ime inch (PPI)?
Nchoputa TCP Xbox Live na UDP Nọmba Ọnụ
Weghachi ma ọ bụ detuo egwu iPod gị na Mac gị
ExoLens ZEISS Wide Angle iPhone Camera Lens
Kedu Ka Ịntanet Si Dị Nnọọ?
Esi zoo ma ọ bụ gbanwee Okwunigwe Uwe na na gburugburu ụlọ
Na-edeta iTunes Nchịkọta faịlụ na Nchekwa Obodo
Okwu Mmalite na ngwanrọ VPN na teknụzụ
Ụlọ ihe ntanetị nke Kasị Mma nke ụlọ
Ndị Ọchịchị Na-amụba Mgbe Nile Na-amụbawanye na Egwuregwu Egwuregwu Roleplaying Board
Ndị aghụghọ Bully, Nkọwapụta, na Usoro maka PlayStation2 (PS2)
Ndị Ikuku Ikuku Ikuku Bluetooth 7 kachasị mma ịzụta na 2018
Okwu Mmalite nke Ọrụ Trackers
Enyemaka Enyemaka Maka Ndị Nne na Nna
Onye na-apụnara mmadụ ihe-Free Walkthrough nke Final Fantasy VII, Nkebi nke 1
Gaa na ndị Gay Gay na Jack'd App
Olee otú iji kpochapụ ihuenyo Mac gị